Bogga ugu weyn Waa maxay Shuraakada Maaliyadeed, oo ma u baahan tahay mid?
Ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay a dhaqaale lammaane u adkaysta waqtiyada sida hoos u dhaca iyo wixii la mid ah. Xirfadlayaashani waxay halkaas u joogi doonaan ujeeddada keliya ee ah bixinta adeegyada maaliyadeed ee shirkadda.
Helitaanka lamaane maaliyadeed aad bay muhiim ugu tahay ganacsi kasta sababtoo ah waxay go'aaminaysaa habka lacag caddaan ah u gasho ganacsiga. Waxa kale oo ay go'aaminaysaa ilaa xadka uu ganacsigaagu u kobci karo xitaa wakhtiyada hoos u dhaca.
La-hawlgalayaasha ganacsi ee maaliyadeed ayaa inta badan xiiseeya kooxda hoggaanka shirkadda, waaxda macluumaadka iyo tignoolajiyada, iyo sidoo kale waaxda xisaabaadka.
Waaxaha aan kor ku soo sheegnay waa kuwa ugu muhiimsan urur kasta.
Tani waa sababta oo ah waxay ku lug leeyihiin maaraynta shirkadda, la socodsiinta shirkadda si ay ula socdaan macluumaadka iyo farsamada koritaanka, ama dhaqaalaha shirkadda.
Shirkadaha qaarkood waxay jecel yihiin inay shaqeeyaan la-hawlgalayaasha maaliyadeed la'aanteed hal sabab ama mid kale sababtoo ah ma garanayaan kuwa lamaanayaasha maaliyadeed iyo haddii ay u baahan yihiin.
Waa kuma lammaane maaliyadeed?
Dhawaan, dadku waxay isku daraan lammaane maaliyadeed iyo lammaane istaraatiijiyadeed laakiin waxay leeyihiin macnayaal kala duwan. La-hawlgalayaasha maaliyadeed waa shaqsi raadiya shirkado leh karti wanaagsan iyo awood dakhli soo saar.
Isaga ama iyada ayaa sidoo kale loo arki karaa maalgashi gaar ah, shirkad, shirkad sanduuqa hedge, shakhsi, iyo xitaa qoys. Shuraakada ganacsi ee maaliyadeed ma shaqayn karo iyada oo aan la helin kaalmada xisaabiye sababtoo ah waxay u baahan yihiin inay noqdaan falanqayn iyo saaxiibtinimo leh awoodda isgaadhsiinta.
Waxay sidoo kale u baahan yihiin xirfado saadaaliya. Dadkan ayaa ah kuwo ay aad ugu kalsoon yihiin cid kasta oo heshiis la gasho awooddooda awgeed.
Akhri Sidoo kale Adeegga Iimaylka ee ugu Fiican Ganacsiga Yaryar 15 | Hagaha Khabiirka
Iskaashiga Maaliyadeed ma yahay shaqo wanaagsan?
Inaad noqoto lammaane dhaqaale waa shaqo wanaagsan oo faa'iido leh. Si kastaba ha ahaatee, shaqadani waxay leedahay wax badan oo ku saabsan shakhsiyaddaada ee maahan shaqada oo keliya. Wada-hawlgalayaasha ganacsiga maaliyadeed ee ka sameeyay goobtan waxaa loo arkaa hoggaamiyeyaal samayn kara oo beddeli kara go'aamada ka baxsan maaliyadda.
Waxay sidoo kale fariintooda ugu gudbin karaan dhagaystayaasha loo baahan yahay qaab saaxiibtinimo leh. Si aad u noqoto lamaane ganacsi oo guulaysta waa inaad lahaataa xirfado ay ka mid yihiin xirfadaha falanqaynta, loolan, iyo xirfadaha gorgortanka. Waxa kale oo aad u baahan tahay xirfado go'aan qaadasho, fikir istiraatijiyadeed, iyo xirfadaha maaraynta xidhiidhka.
Dhammaan xirfadaha lagu xusay, waxaad ogaan doontaa in qaar ka mid ah ay leeyihiin waxyaabo badan oo ku saabsan shakhsiyaddaada, ma aha oo kaliya xirfad aad baratay oo aad horumarisay. Si aad ugu fiicnaato goobtan, saaxiibo badan la samee dadka aan ku jirin ganacsiga maaliyadda oo keliya. Waa inaad sidoo kale tabaruc u samaysaa mashaariicda la xidhiidha goobta.
Sidoo kale baro sidaad u isticmaashid agabka ay ka midka yihiin kaadhadhka dhibcaha isku dheeli tiran, qarashka ku saleysan dhaqdhaqaaqa, iwm. Kadibna samee xirfadaha hogaaminta, iskuna day inaad hesho tababare kugu haga.
Shuraakada Ganacsiga Maaliyadeed Sharaxaada Shaqada
La-hawlgalaha ganacsi ee maaliyadeed wuxuu leeyahay shaqo aad u badan oo uu ku sameeyo urur kasta sababtoo ah inta badan go'aanka maaliyadeed wuxuu ka bilaabmaa xafiiskooda. Go'aamadani waxay saameyn doonaan waaxyaha kale ee ururka iyo sidoo kale kuwa kula tartamaya.
Shaqada Shuraakada Ganacsiga Maaliyadeed waa inuu:
Wanaaji warbixinnada maaliyadeed ee waxqabadka ganacsiga.
Bixi xogta gorfaynta si loo fahmo istaraatiijiyada ganacsiga si fiican.
Hubi in yoolalka la gaaray.
Dhis iskaashi iyo sidoo kale joogteeyo xiriir wanaagsan dhammaan kooxaha.
Kaalmo diyaarinta miisaaniyada.
Ka caawi saadaalinta dhaqaalaha.
Haddii lammaane ganacsi ahaan dhaqaale ahaan aanad fulin karin hawl kasta oo kor ku xusan markaa shaqadani adiga maaha. Waa inaad lahaataa dhammaan sifooyinka looga baahan yahay shaqadan sababtoo ah waxay aad muhiim ugu tahay kobaca gudaha iyo dibadda ee ururka.
Ma noqon doontid mid caadi ah xisaabiye laakiin mid u qalma oo wata ACA, ACCA ama CIMA oo ay weheliso xirfadaha loo baahan yahay.
Arag tani: Sida Looga Sameeyo Lacag Ebay Ah Adoo Aan Waxba Iibin | Cusbooneysii 2022
Shuruudaha Iskaashatada Maaliyadeed
La-hawlgalayaasha ganacsi ee maaliyadeed, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad haysato ugu badnaan 100% shahaadooyinka iyo ugu yaraan 90% iyaga. Markasta oo shahaadooyinkaagu bataan, waxay sare u qaadaysaa fursadahaaga shaqo. Si aad ugu qalanto lammaane maaliyadeed, waa inaad haysataa shahaadooyinkan soo socda.
Shahaadada Bachelor-ka: Waxaa lagaa doonayaa inaad haysato ugu yaraan shahaadada koowaad ee jaamacadda ee maadooyinka la xidhiidha sida Maaliyadda, Dhaqaalaha, Xisaabinta, ama wax kasta oo kale oo la xidhiidha daraasadda.
Heerka waayo-aragnimada: Waa inaad haysataa ugu yaraan 5 sano oo waayo-aragnimo ah si aad awood ugu yeelatid inaad ka shaqeyso lammaane maaliyadeed oo xirfad leh urur kasta, ha ahaado mid gaar ah ama koox. Haddii aad leedahay ilaa 10 sano oo waayo-aragnimo ah, markaa waxay sidoo kale kuu tahay faa'iido dheeraad ah sababtoo ah waxay kaa dhigi doontaa inaad shaqeyso ama lagu sii hayo loo-shaqeeyayaasha qaarkood.
Xirfadaha isgaarsiineed: Lamaanaha dhaqaale waa inuu lahaado xirfado wadagaarsiineed oo wanaagsan mid hadal iyo mid qoraal ah. Waa inaad si fiican ugu soo bandhigi kartaa xogtaada iyo go'aamadaada dhagaystayaasha si wanaagsan oo qoraal iyo hadal ah si aad u fahanto. Af ahaan kuma fiicnaan kartid oo kuma fiicnaan kartid qoraalka, waa in ay wada socotaa.
Xirfadaha falanqaynta: Waa inay awood u yeeshaan inay kala saaraan macluumaadka qaybo ka mid ah si go'aannada ay u sahlanaato in la sameeyo. Si loo gorfeeyo, waxa aad noqon doontaa mid macquul ah, muhiim u ah fikirkaaga, ku wanaagsan cilmi-baadhista, oo waliba ku hufan falanqaynta xogta.
Intaa waxaa dheer, lammaanaha ganacsiga maaliyadeed waa inuu sidoo kale ahaado mid hal abuur leh.
Xirfadaha gorgortanka: Tani waxay la xiriirtaa xallinta khilaafaadka u dhexeeya labada dhinac. Si wadahadalku u noqdo mid guulaysta, waa in dhinac ka mid ah uu u tanaasulay labada dhinac si ay heshiis u gaaraan.
Xirfaddaani aad ayey muhiim ugu tahay lamaanayaasha maaliyadeed sababtoo ah waxay u baahan doonaan inay ogaadaan goorta ay tanaasulayaan iyo marka ay ku qancinayaan heshiiska inuu guuleysto.
Xirfadaha gorgortanku waxay ka kooban yihiin dhegeysi firfircoon, caqli-gal shucuureed, maarayn filasho, dulqaad, laqabsi, qancin, qorsheyn, iwm.
Xirfadaha badan: Tani waxay keenaysaa awoodda lagu xakameynayo oo lagu guda jiro mas'uuliyado dhowr ah iyadoo la qabanayo mid ka mid ah lana ilaalinayo hawlaha kale. Xirfaddan waxaa aad u raadiya loo-shaqeeyayaasha.
Si aad hawlo badan u qabato, waa inaad samaysaa liis wax-qabad, dooro mudnaantaada, ka bacdina koox-hawleedyo la mid ah, iska ilaali wax kasta oo khalkhal gelinaya, oo aad u wakiisho kuwa u baahan in loo igmado.
Xirfadaha xalinta dhibaatada: Tani waa awooda lagu maareeyo dhibaatooyinka culus iyo kuwa adag. Waxa ay gacan ka geysataa go'aaminta halka ay mushkiladdu ka imanayso waxayna sidoo kale la timaadaa xalalka dhibaatada.
XIDHIIDHKA: 15 Mashruuc alwaax xoq ah oo si waali ah u iibiya
Si aad mashaakil u xalliso waa inaad haysataa waxyaabaha soo socda; dhegeysi firfircoon, falanqayn, cilmi-baaris, hal-abuurnimo, isgaarsiin, ku-tiirsanaan, go'aan-qaadasho, iyo dhisidda kooxda.
Dhammaan kuwan waa dhammaan shahaadooyin ay tahay in lammaanaha maaliyadeed uu haysto ka hor inta uusan shaqo u raadin goobta. Wax badan ayaa laga filayaa lammaane ganacsi oo maaliyadeed waana sababta dhammaan xirfadahan looga baahan yahay iyaga ka hor shaqada.
Mushaharka Saaxiibka Maaliyadeed
Laga bilaabo Noofambar 2021, mushaharka lammaanaha maaliyadeed wuxuu ahaa $120,793. Tani waxay noqon doontaa $58.07 saacadii, $2,323 todobaadkii, iyo $10,066 bishii. Khubarada goobta ku sugan waxay kasbadaan ilaa $180,500 halka heerka gelitaanka uu kasbado ilaa $65,000 halka kuwa dhexda ka shaqeya ay helaan ku dhawaad ​​$95,000. Mushaharka lamaanayaasha maaliyadeed waa mid aad u xiiso badan.
Waxa jira magaalooyin qaar uu shuraakada maaliyadeed ka helo wax ka sarreeya celceliska qaranka. Mushaharkani wuu kala duwan yahay inkasta oo ay ku xidhan tahay waxbarashada, shahaadooyinka, iyo waliba khibrada aad ka heshay goobta. Waa shaqo aad u faa'iido badan meel kasta oo aduunka ka mid ah sidoo kale waxay keenaysaa shaqo badan oo ka timaada qofka ku lug leh.
Baadhid Meheradaha Dhaqaale Sameeya Isla markaaba 2022 ka hor inta aadan bilaabin ganacsigaas.
Sida Loo Doorto Saaxiibka Dhaqaale ee Saxda ah
Ma ogtahay in 50% ganacsiyada ay fashilmaan ka hor inta aysan bilaabin ama xitaa dhowr sano ka dib marka ay bilaabaan sababo la xiriira sida ay u maareeyaan ilo dhaqaale? Sida shirkadu wax uga qabato raasamaal la'aanteeda, qorshayn la'aanta, iyo sidoo kale sida ay u maamulaan socodka lacagta kaashka ah iyo miisaaniyada suuqgeyneed ayaa saameyn weyn ku leh shirkadda.
Meherad kasta oo aan lahayn lamaane maaliyadeed ayaa durba la kulmaya dhibaatooyinkiisa sababtoo ah lamaanaha maaliyadeed ayaa ka caawiya inay qorsheeyaan socodka lacagta caddaanka ah iyo agabkooda. Haddii aad raadinayso sidii aad u dooran lahayd lammaane dhaqaale ama aad qiimeyso midkii aad hore u lahayd, ka dib iska hubi iyaga.
Ku nadiifi ereyadaada ereyada maaliyadeed.
Samee liis waxa aad rabto
Baadh oo waraysi la-hawlgalayaasha mustaqbalka.
Samee jeegareynta tixraaca ee toosinta.
Waa in aad cadaysato erayadaada haddii aad rabto in aad ka shaqeyso lamaane dhaqaale. Dadka qaarkiis waxay ku wareeraan xisaabaadka iyo maaliyadda sababtoo ah labaduba waxay ku xiran yihiin lacag.
Dadka qaarkiis waxa ay yidhaahdaan maaliyaddu waa halka ay wax walba ka bilaabmaan xisaab xidhkuna waa halka ay wax walba ku dhammaadaan. In kasta oo haysashada xisaabiye ay khusayso labada qaybood ee urur kasta.
Khabiir maaliyadeed loogama baahna xafiiska xisaabinta; tani waa si go'aano wanaagsan loo gaaro. Ganacsade ahaan, waa inaad awood u yeelatid inaad wada hadal la yeelato lamaanayaasha maaliyadeed ee suurtogalka ah si aad u qiimeyso baahiyaha shirkaddaada.
Kahor intaadan dooranin waa inaad isweydiisaa waa maxay aragtida shirkaddayda, maxay yihiin qiyamka aan leeyahay, maxaan ka filayaa lamaanaha maaliyadeed, maxay yihiin meelaha ay ku wanaagsan yihiin iyo meelaha ay ku liidato ganacsigayga, maxay tahay miisaaniyadayda, maxay tahay shaqada aan doorbido. qabanqaabada, mid online ama goobta?
Waa inaad sidoo kale awood u yeelatid inaad baari karto oo aad wareysato la-hawlgalayaasha maaliyadeed ee suurtagalka ah maadaama aad haysato liis dhamaystiran oo shakhsiyaad ah. Waxaad ku bilaabi kartaa waraysiga codsadayaasha ilo lagu kalsoon yahay. Marka aad dhammayso waraysiga waxaad markaas ka fikiri kartaa inaad baadho profile-kooda.
XIDHIIDHKA: 10 Shaxda Iimaylka Ganacsi ee ugu Fiican ee Bilowga iyo Shirkadaha 2022
Haddii aad qorshaynayso inaad bilowdo ganacsi, waxa hubaal ah inaad waydiin lahayd maxaa ma tahay lacagta cashuurta ee Premium? Sidee U Shaqeeya?
Iskaashatada Maaliyadeed Vs Shuraakada Istaraatiijiga ah
Waxaa jira farqi cad oo u dhexeeya lammaane maaliyadeed iyo lammaane istiraatijiyadeed. Waxa kale oo jira sababo ay milkiilayaasha ganacsiyadu u doortaan mid kasta oo ka mid ah shuraakooyinkan. Laakin soo koobid ayaa ah in shirkad si ay u koraan aad u baahan tahay lamaane maaliyadeed si ay lacag caddaan ah u soo galaan oo uu jiro lamaanahaaga istaraatiijiga ah ee baranaya alaabtaada iyo saldhigga macmiilka.
Lammaanaha istaraatiijiyadeed waa qof shaqadiisa sharraxaaddeedu tahay inuu barto alaabtaada. Isaga ama iyadu waa inay sidoo kale yaqaanaan saamiga suuqaaga iyo saldhigga macmiilkaaga.
Waxay aad u xiiseeyaan awoodda ganacsiga waxayna sidoo kale eegaan inay lacag badan u sameeyaan ganacsiga iyagoo kordhinaya tignoolajiyada la isticmaalo, kordhinta saamigooda suuqa, iyo sidoo kale kordhinta ama beddelka alaabada haddii loo baahdo.
La-hawlgalayaasha maaliyadeed waxa kaliya oo uu eegayaa maalgashigiisa oo wuxuu si fiican u hubiyaa maalgashiga ka hor inta uusan gelin. La-hawlgalayaasha maaliyadeed way ku adag tahay inuu ganacsi sameeyo marka loo eego lammaanaha istaraatiijiga ah.
Dadkani waxay sidoo kale muhiim u yihiin la-hawlgalayaasha istiraatiijiga ah sababtoo ah waxay caawiyaan xiritaanka heshiisyada keeni doona lacag caddaan ah oo aad u badan shirkadda. Waxay ku qaadataa wakhti yar si ay u dhamaystiraan wax kala iibsiga marka loo eego lammaanaha istaraatiijiga ah.
Waa maxay FPCU?
Waa Iskaashatada Maaliyadeed ee Credit Union waxayna dadka ka caawiyaan xal u helida dhibaatooyinkooda maaliyadeed sida deymaha, kaydinta, iyo hubinta xisaabaadka.
Sideed ku heli kartaa lammaane dhaqaale oo sax ah?
Waxay u baahan tahay dulqaad si loo helo lammaane dhaqaale oo sax ah. Qaar ka mid ah la-hawlgalayaashaan ayaa u jooga inay cunaan ganacsigaaga sidaa darteed dulqaadku waa muhiim si loo helo kuwa saxda ah.
Maxay yihiin talooyinka lagu heli karo shuraakada maaliyadeed ee saxda ah?
Ugu horreyntii, waa inaad raadsataa maalgashadayaasha, ururin xogta wax kasta oo lagaaga baahan doono, ka dibna ilaali isku xirka.
Lamaanaha istiraatijiyadeed miyuu ka faa'iidaysan karaa lamaanaha maaliyadeed?
Labadan la-hawlgalayaasha ah waa kuwo wanaagsan oo aad loogu baahan yahay urur kasta. La-hawlgalayaasha maaliyadeed ayaa keenaya qulqulka lacagta caddaanka ah halka lammaanaha istaraatiijiyadeed uu maamulo lacagta caddaanka ah oo uu hubiyo in shirkadu ay wax badan ka soo saarto maalgashiga la sameeyay.
Maxaan ugu baahanahay lamaane maaliyadeed?
Waxaad u baahan tahay lamaane maaliyadeed si uu u maareeyo qulqulka lacagta caddaanka ah ee ururkaaga ama ganacsigaaga. Waxa kale oo loo baahan yahay si ay uga caawiyaan ganacsigu inuu u adkaysto dhibaatooyinka maaliyadeed gaar ahaan wakhtiyada hoos u dhaca.
Faa'iidada lamaanaha maaliyadeed ee ganacsi kasta lama dhayalsan karo. Waxay gaadhaan inta badan go'aamada maaliyadeed ee urur waxayna ka caawiyaan inay u adkeystaan ​​dhibaatooyinka maaliyadeed. Si ganacsigaagu u horumaro, waa inaad ka fikirtaa inaad adeegsato mid ka mid ah adeegyada.
Kulliyadaha 15 ee Loogu Tala Galay Qorsheynta Maaliyadeed 2022
Intee in le'eg ayaad tahay inaad kasbato si aad u xarayso cashuuraha 2022
500M BARNAAMIJKA GANACSIGA GANACSIGA FACEBOOK YAR 2022
Madaxaaga ma u dhufatay sababta oo ah ganacsigaagii xumaaday ama ma ka werwersantahay inuu u dhaco isla markiiba…
15 Kaararka Amaahda Ganacsiga ugu Fiican 2022